FAQ - Makwai Anti-Kuneta Mat Co., Ltd.
AHOME ndiye China yokutanga uye chete inopfuura German (TUV) CE advertising mitemo vaitungamirira mugadziri uye ekisipota pamusoro Anti-kuneta nepanhovo.
yakakura sei AHome?
153 vashandi zvachose, 20 basa R & D chikwata, 5 mukuru mainjiniya uye 20 okutengesa vanhu. 90% of chigadzirwa vanotengeswa kunyika dzinopfuura 50 uye nzvimbo dzakadai America, Japan, South Korea, Canada, Europe, South America, Australia, uye zvakawanda.
Chii chinoumba kukosha AHome?
AHome adopts mwedzi nomwedzi mishonga kunyanya itsva havasi sandara yakamira dhesiki nepanhovo, mureza kumira dhesiki nepanhovo uye kuramba kuparadzira zvigadzirwa unhu mumwe munhu, wose mutengi mwoyo. "Sikai vakarongeka kunyaradza" vanoumba rakakwana AHome muchiso.
Ndezvipi AHome huru zvigadzirwa?
AHome ari kushandisa mukugadzira, yokutengesa uye R & D kwete sandara & sandara yakamira dhesiki nepanhovo, kicheni nyaradzo nepanhovo, zvokurapa nepanhovo, kuvhiya uriri nepanhovo uye bhabha nepanhovo uye zvichingodaro.
Chii chinogona AHome zvigadzirwa kushandiswa & rikashandiswa?
Anti - kuneta nepanhovo vave nekusimba kuwedzera ubereke uye kuderera shure, ibvi uye mutsipa kukuvara uye soreness. Application-Industrial, Retail, Home, Nomutsa, Mail Rooms, unovhara, Wet Areas, etc.
Ergonomic Office Floor Mat, Desk Anti-Kuneta Mat, Pvc Anti Fatigue Mat, Office Anti Fatigue Mat, Leather Desk Mat, Anti Fatigue Mat Kitchen Floor,